SARUDZA MUTAURO Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Altai Alur Arabic Armenian Assamese Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Bété Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Guarani Guerze Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuVietnam Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kubvuma zvaunenge wakanganisa kuchaita kuti vanhu vavimbe newe uye hauzoiti zvinhu usina kufunga.
Chimbofungidzira izvi: Tim paanenge achitamba neshamwari dzake, anokanda bhora robva ranotema hwindo remota yevaridzi.
Dai uriwe Tim, waizoita sei?
UNE ZVINHU 3 ZVAUNOGONA KUITA:
Kuudza varidzi vemota zvaitika, wotaura kuti ucharibhadhara.
Kamwe kapfungwa kanogona kuti ita zviri paA. Asi pane zvakanakira kubvuma kana wakanganisa, ungave wapwanya hwindo kana kuti waita chimwe chinhu.
ZVAKANAKIREI KUBVUMA KANA WAKANGANISA?
Bhaibheri rinoti: “Tinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose.”—VaHebheru 13:18.
Vanhu vanowanzoregerera munhu anenge abvuma kuti akanganisa.
Bhaibheri rinoti: “Munhu anofukidza kudarika kwake haazobudiriri, asi anoreurura nokuzvisiya achanzwirwa ngoni.”—Zvirevo 28:13.
Chinotonyanya kukosha ndechokuti unenge wafadza Mwari.
Bhaibheri rinoti: “Munhu anonyengedzera anosemesa Jehovha, asi Iye anoshamwaridzana nevakarurama.”—Zvirevo 3:32.
Karina, ane makore 20, haana kumboudza baba vake kuti akapihwa tiketi nemhaka yekumhanyisa mota. Asi nyaya iyi yakazobuda. Karina anoti, “Baba vakazozvibata patopera gore pavakaona tiketi rakanyorwa zita rangu. Ndakabva ndapinda panguva yakaoma!”
Karina akadzidzei? Anoti: “Kana ukavanza zvaunenge wakanganisa unenge uchitoomesa zvinhu. Zvinozongobuda nekufamba kwenguva!”
Bhaibheri rinoti: “Tose tinokanganisa kazhinji.” (Jakobho 3:2) Sezvataona, kana tikakurumidza kubvuma zvatinenge takanganisa, tinenge tichiratidza kuti tinozvininipisa uye kuti tinofunga sevanhu vakuru.
Chechipiri, unofanira kudzidza pane zvaunenge wakanganisa. Musikana anonzi Vera anoti: “Ndinoedza kudzidza pane zvandinenge ndakanganisa kuti ndisazozvidzokorora.” Ngationei kuti ungazviita sei.
Ngatitii wakumbira baba vako bhasikoro asi wobva wariuraya. Unoita sei?
Unongonyarara uchifunga kuti baba vako havazozvioni.
Unoudza baba vako zvose zvaitika.
Unoudza baba vako zvaitika asi wopomera mumwe munhu.
Ngatitii wafoira nenyaya yekuti hauna kunyatsoverenga. Unoita sei?
Unotaura kuti pepa racho ranga rakaoma.
Unobvuma kuti ndiwe wazvifoirisa.
Unotaura kuti mudzidzisi akakumaka.
Kuramba uchifunga zvawakakanganisa kwakafanana nokutyaira motokari asi uchiramba wakatarisa girazi rinoratidza kwauri kubva
Iye zvino funga nezvatichangobva kutaura, womboedza kufungidzira uri iwe (1) baba kana kuti (2) mudzidzisi. Kana ukakurumidza kubvuma zvawakanganisa mudzidzisi wako uye baba vako vachanzwa sei? Vachafunga kuti uri munhu akaita sei kana ukavanza zvaunenge wakanganisa?
Iye zvino chifunga zvawakakanganisa gore rakapera wopindura mibvunzo inotevera.
Wakakanganisa chii? Wakabva waita sei?
Ndakangovhara-vhara nyaya yacho.
Kana usina kubvuma zvawakakanganisa, wakasara uchinzwa sei?
Ndakafara nekuti havana kuzvibata!
Ndakasara ndichinetseka ndichingoti, dai ndakataura chokwadi.
Ndezvipi zvakanaka zvaungadai wakaita?
Nei vamwe vanhu vachitya kubvuma kana vakanganisa?
Kana ukagara uchivanza zvaunenge wakanganisa vanhu vachakuona semunhu akaita sei? Ko kana ukabvuma vanokuona sei?—Ruka 16:10.
Mumwedzi 12 inotevera, ndezvipi zvauri kuda kuzoita kana wakanganisa?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Mhinduro 10 Dzemibvunzo Yevechiduku
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mhinduro 10 Dzemibvunzo Yevechiduku